JINGHPAW KASA: ဗမာစစ်သားအချင်းချင်းပစ်ခတ် (၂) ဦးသေဆုံး
နိုင်ဝင်ဘာ (၂) သောကြာ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ နယ်မြေ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ (၄) ဒေသ မုန်ဂူအခြေစိုက် ဗမာအစိုးရစစ်တပ် ခလရ (၆၈) တွင် အောက်တိုဘာ (၃၁) ရက်၌ ဗမာစစ်သားအချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နှစ်ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မုန်ဂူ အခြေစိုက် ဗမာအစိုးရစစ်တပ် ခလရ (၆၈) မှ စစ်သားများကို ကင်းလှည့်ရန် ခိုင်းစေရာ စစ်သားတစ်ဦးမှ အမိန့်နာမခံပဲ တပ်စခန်းတွင်သာ အရက်သောက် မူးယစ်ပြီး ကျန်ခဲ့ကြောင်း၊ စစ်သားများ ကင်းလှည့်ရာမှ ပြန်ရောက်ချိန်အထိ မူးယစ်နေသော ကြောင့် တာဝန်ရှိစစ်ဗိုလ်မှ ဆဲဆိုကျိန်းမောင်းရာ စစ်သားမှ တာဝန်ရှိစစ်ဗိုလ်အား သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ပစ်သတ်ခံရသော ဗမာစစ်ဗိုလ်၏ ကိုယ်ရံတော်ကလည်း ထိုစစ်သားကိုပြန်လည် ပစ်သတ်ခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံးသွားသော ဗမာစစ်ဗိုလ်နှင့် တပ်သားကို မုန်ဂူ လယ်ကွင်းပြင်တွင် နိုင်ဝင်ဘာ (၁) ရက်နေ့၌ သွားရောက်မြုပ်နှံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Two Burmese soldiers shot each other in Munggu, which is under KIA (4th ) Brigade area, Northern Shan State, on 31st October, according to the KIA frontline officer report. The commander, from Burmese army light infantry unit (68), commanded one of the soldiers to patrol but that soldier didn’t obey command to patrolling and left in the camp, drunk too much until the patrolling group arrived. Thus, the captain cursed that drunkard soldier, but the soldiers opened fire to his captain. And, the captain’s body guard shot that soldier again that drunkard soldier, on that day. The dead body of captain and soldier were buried in the Munggu paddy field.